Mataanaha ANC, Fresh´n Rebel waxay horumarinaysaa qaabkeedii guusha | War gadget
Miguel Hernández | 10/06/2021 11:30 | La cusbooneysiiyay 10/06/2021 12:46 | General, Reviews
Lasocda daahfurka dhowaan Fresh´n Rebel Clam Elite, Shirkaddu waxay kaloo go'aansatay inay siiso hawo nadiif ah qaybaha mataanaha ah, dhagaha dhageysiga midabbada leh ee loogu talagalay 'ANC' kuwaasoo helay dib u eegisyo badan oo wanaagsan. Hadda waxay lahaan doonaan muuqaal dheeri ah oo ka dhigi doona iibsashadaada xitaa soo jiidasho leh, joojinta buuqa firfircoon.
Waxaan si qoto dheer u falanqeynay mataanaha cusub ee loo yaqaan 'Twins ANC' ee ka socda Fresh headn Rebel, sameecado dhago furan oo run ah oo leh buuq la joojiyay iyo qaab aad u xiiso badan Nala joog oo soo hel waxyaabaha cusub ee Fresh´n Rebel u soo kordhiyay qaabkan dhagaha ee TWS oo aan hore u sii ogaanay.
3 Joojinta buuqa iyo xakamaynta codka
4 Tayada maqalka iyo khibrada isticmaale
Xaaladdan oo kale Fresh´n Rebel waxay go'aansatay inay ku sharraxdo midabkeeda caanka ah ee caanka ah, waxaan heli doonnaa iyaga oo la heli karo, mid kasta oo leh magaciisa ganacsi ee midabada soo socota: Dahab, casaan, cagaar, casaan, buluug iyo madow. Xaaladdan oo kale, sanduuqa ayaa soo maray dib u qaabayn weyn, oo ka sii socota inuu ahaado nidaam furitaan oo ka sarreeya qaab "qolof" ah. Sanduuqa wuxuu leeyahay cabbir si cadaalad ah u kooban oo leh goolal waaweyn oo loogu talagalay keydinta fudud. Dhinaceeda, gudaha waxaan ku yeelan doonnaa tilmaame LED ah xaaladda dhagaha iyo sidoo kale badhanka iswaafajinta.
Sameecadaha dhagaha ayaa ku jira dhegta, waa wax caadi u ah sameecadaha TWS markay leeyihiin joojinta buuqa firfircoon. Waxay leeyihiin naqshad nalagu baran doono, iyagoon si xad dhaaf ah u dheerayn, aad ayey u ballaaran yihiin. Marka laga hadlayo raaxada, way fududahay waxayna leeyihiin suufyo kala duwan, sidaa darteed wax dhibaato ah nagama yeelan doonaan meelayntooda. Wadarta miisaanka aaladda waa 70 garaam, in kasta oo aanan kala garanayn cabirka saxda ah ee kiiska lacag bixinta iyo miisaanka dhagaha la galiyo si gooni ah. Si kastaba ha noqotee, waa inaan adkeynaa inaan iska caabinno biyaha, dhididka iyo boodhka leh shahaadada IP54, sidaa darteed waxaan u isticmaali karnaa inay ku tababaraan dhibaato la'aan.
Sida caadiga ah, garan mayno nooca saxda ah ee Bluetooth kaas oo fuushan, in kasta oo la tixgelinayo xawaaraha iyo madax-bannaanida, haddana wax walba waxay muujinayaan in Fresh'n Rebel uu doortay Bluetooth 5.0 oo ah wax caadi ah. Waxaan leenahay dareemayaal dhawaansho ah oo hakad gelin doona nuxurka maaddooyinka badan markii aan ka saarnno dhegahayaga, isla sidaas ayaa dhici doonta markaan dib u dhigno, in muusiggu uu ka sii dhawaaqi doono halkii uu joogay Maxaa intaa ka badan, samaacadaha dhagaha waa Labaad Master, taasi waa, si gooni ah ayaa loo isticmaali karaa maaddaama labaduba ay si toos ah ugu xirmaan isha codka.
Marka laga hadlayo ismaamulka, ma hayno xog la xiriirta awooda mAh, laakiin waxaan helnay ku dhowaad 7 saacadood oo ismaamul ah oo leh dhageysato dhegeysi hal fadhi ah, lCalaamaduhu waxay ballanqaadayaan inta udhaxeysa 7 iyo 9 saacadood waxay kuxirantahay qaabka joojinta buuqa ee aan dhaqaajinay, xogta u dhigma falanqayntayada. Haddii aan tirino eedeymaha ay soo bandhigtay kiiska, ismaamulka wuxuu gaarayaa ugu yaraan 30 saacadood wadar ahaan hadii aanan dhaqaajin ANC, taasoo hoos ugu dhici karta ilaa 25 saacadood hadaan dhaqaajino. Dhinaceeda, lacagta buuxda ee sanduuqa waxay noqon doontaa laba saacadood, qiyaastii saacad iyo badh haddii aan dooneyno inaan si buuxda u buuxino dhagaha.
Joojinta buuqa iyo xakamaynta codka
Joojinta dhawaaqa ayaa ficil noqon doonta markaan dhaqaajinayno, tan waxaan u taaban doonnaa samaacadaha, maadaama ay leeyihiin guddi taabasho. Intaas waxaa sii dheer, waxaan dooran karnaa "Ambience Mode" kaas oo qayb ka mid ah buuqa ka qabanaya makarafoonada si loo bixiyo nidaam go'doomin yar oo khatar ah xaaladaha qaarkood.
Joojinta buuqa caadiga ah: Waxay joojin doontaa dhammaan qeylada leh awoodda ugu badan.
Joojinta dhawaaqa ayaa ku filan qiimaha kala duwan ee aan qabaneyno, Sida iska cad way ka yara fog yihiin waxyaabaha kale sida AirPods Pro, si kastaba ha noqotee, ilaa iyo inta aan suufka si fiican u dhigeyno, joojinta buuqa ayaa noqon doonta mid soo jiidasho leh. Uma muuqato inay si xun u saameyneyso baaska iyo bartamaha imtixaannadeenna, in kastoo aan joojineyno inaan aragno codad jilicsan oo qaarkood. Qaybtaan qalad kuma saari karno haddii aan eegno suuqa iyo qiimaha ay bixiyaan kuwa kale ee lagu beddelayo qaylada firfircoon ee aan la tashan karno.
Tayada maqalka iyo khibrada isticmaale
Way maqan tahay in Fresh'n Rebel uu doortay inuu dhexgalo mataanaha ANC nidaamka isku mid ahaanta ee aan ka helno 'Clam Elite'. Si kastaba ha noqotee, samaacadaha dhagaha ayaa si fiican u yimaada si ay u siman yihiin, in kastoo sida caadiga ah ay ku dhacaan noocyada noocan ah waxay si gaar ah ula socdaan si ay u bixiyaan natiijo wanaagsan oo leh muusikada ganacsiga hadda jira. Waxaan leenahay joogitaan wanaagsan oo mug leh iyo mug aad u sarreeya, wax la yaab leh iyadoo la tixgelinayo inaan sidoo kale ku dari doonno buuq firfircoon.
Heerka isku xirnaanta wax dhibaato ah ma aysan keenin, isku xirmaan si dhakhso leh oo fudud, sida markii aad ahayd Labaad Master Waxaan awoodnay inaan ka faa'iideysanno si aan ula kulanno kaliya mid ka mid ah dhagaha dhagaha mararka qaar. Waxay si dhakhso leh ugu xiran yihiin isha codka si la mid ah sida ay u jaraan oo u joojiyaan muusikada markii aan u dhigno kiiska, qaybtaan khibraddu way fiicneyd. Heerka aynnu ku qabsan karno codkeenna makarafoonka, way ku filan yihiin wada-hadallada, in kastoo tani aysan ahayn barta ugu caansan, ma bixiso khibrad aan dib ugu eegi karno sida xun.
runtuna waxay tahay inaysan uga tagayn qayb kasta oo dhadhan xun ay afka ku hayaan fiiro gaar ah u leh. Kiiska xukunku waa mid raaxo leh, wejiyo badan oo waara. Dhinaceeda, sameecadaha dhagaha ayaa ku jira dhegta, wax ku dhow qasab mareegta ANC waxayna ku dhacdaa xuduudaha "caadiga ah". Shaki la'aan waa dalab cusub oo soo jiidasho leh mar labaad oo ka yimid nooc aad diiradda u saaraya dhalinyarada da 'yarta ah oo ujeedadeedu tahay in la abuuro waayo-aragnimo wareegsan, iyada oo aan la iska yeelyeel badan laakiin taasi waxay la kulantaa sida saxda ah wixii ay ku ballanqaaday.
Wax ka badalidii ugu dambeysay: 10 Juunyo 2021
Lacag la'aan Qi
Wadada buuxda ee maqaalka: War gadget » General » Mataanaha ANC, Fresh´n Rebel waxay horumarinaysaa qaabkeedii guusha